Isticmaalka Gaadiidka Dadweynaha ee İzmir wuxuu hoos udhacay 77 Boqolkiiba Isniinta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirIsticmaalka Gaadiidka Dadweynaha ayaa hoos udhacay 77 boqolkiiba usbuuca fasaxa ee Izmir
24 / 03 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee Izmir ayaa hoos u dhacay usbuuc dhammaadka
Welwelka coronavirus wuxuu yareeyay tirada kuwa doorbidaya gaadiidka dadweynaha ee Izmir dhammaadka usbuuca. 21-22 Maarso, tirada dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 77 marka loo eego laba toddobaad ka hor.
Tirada muwaadiniinta adeegsanaya gaadiidka dadweynaha usbuuca dhammaadka ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 77 marka loo eego laba toddobaad ka hor. Sabtidii, Maarso 21, 2020, 412 kun 74 qof ayaa dul degey dhammaan gaadiidleyda dadweynaha. Lambarkan wuxuu ahaa 7 milyan 1 kun 529 Sabtidii, Maarso 202. Marka la barbar dhigo usbuucii hore, sicirka dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha ayaa hoos udhacay 73,1 boqolkiiba.
Axaddii, Maarso 22, tirada raacitaanka gaadiidka dadweynaha ayaa hoos u dhacday oo waxay hoos ugu dhacday 209 kun 976. Axadii (8-dii Maarso) laba toddobaad ka hor, tiradan waxay ahayd 1 milyan 93 kun 201. Tirada dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha ayaa hoos u dhacay 80,1 boqolkiiba marka loo eego laba toddobaad ka hor. Marka la eego celceliska celceliska labada maalmood, tirada dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha usbuuca dhammaadka ayaa hoos u dhacay qiyaastii 14 boqolkiiba marka loo eego 77 maalmood ka hor.
Safarrada doonta ayaa sidoo kale la dhimay
Sababta oo ah hoos udhaca tirada rakaabka 60 boqolkiiba maalmaha shaqada ee maalmaha shaqada ee gaadiidka dadweynaha, ayaa sidoo kale adeegyada doonta ayaa sidoo kale lagu qasibay mitrooga iyo taraamka. Bostanlı-Karşıyaka- Agaasinka guud ee shirkadda 'DZDENİZ', oo bilaabay duulimaadyo giraan ah inta udhaxeysa jihooyinka baasaboorada-Alsancak, ayaa hoos u dhigay tirada duullimaadyadan.
Saacadihii ugu dambeeyay 20.00 iyo 21.00
Karşıyaka- Konak, Bostanlı-Konak, Karşıyaka-Passport-Alsancak iyo Bostanlı-Passport-Alsancak Khadadka ayaa shaqeyn doona inta u dhaxaysa 07.00-10.00 subaxnimada iyo 16.30-20.00 fiidkii. Howlaha maraakiibta ayaa sii socon doona inta u dhexeysa 07.00-21.00.
Sidaas ku sii wad ”
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu uga mahadceliyay xasaasiyadda ay muujiyeen wuxuuna yiri “ku sii wado si la mid ah”. Isagoo carrabka ku adkeeyay in xaaladda koowaad ee dagaalka ka dhanka ah cudurka dilaaga ah ay tahay in laga hortago faafitaanka fayraska, Madaxweyne Soyer wuxuu yiri, “Aan guryaheenna ku joogno intii suurtogal ah. Aynu isla xiriirno kuwa aan jecel nahay iyo saaxiibbadayada. Si looga fogaado kuwa ay tahay inay shaqeeyaan oo baxaan, si looga fogaado xiriir jireed qof kasta iyo wax kasta; Waxaan kugu casuumay inaad fiiro gaar ah u yeelato nadaafadda. Xirfadlayaasheena caafimaad ayaa horeyba uga shaqeynayay duruufo aad u adag oo aad u wanaagsan. Aynu ka baxno, aynu ka dhigno shaqadooda sida ugu fudud ee suuragalka ah. ”
Isticmaalka Gaadiidka Dadweynaha wuxuu Yareeyaa 40 boqolkiiba Kocaeli Sababta Feyras
Mugga gaadiidka tareenka ee kuyaal Maraykanka oo hoos udhacay 5.
Xiiseyn isbuuc ah oo ka dhacaya Atabary Ski Resort
Xiisad isbuuc ah oo ka dhacda Cibaadir Cakarta
RayHaber 24.03.2020 Warbixinta Shirka